ကြှနျတျောတို့တှဟော မကွာခဏဆိုသလို ခွထေောကျကို ခြိတျထိုငျလရှေိ့ကွပါတယျ။ အမှနျတကယျမှာတော့ ဒီလို ခွထေောကျကိုခြိတျထိုငျတာက ကိုယျ့ကိုကိုယျယုံကွညျခကျြကိုတိုးပှားစတေယျ၊ စတိုငျကစြတေယျ. . . ဆိုတာတှေ ဖွဈခငျြဖွဈနိုငျပမေယျ့ ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ကနကွေညျ့ရငျ မကောငျးတဲ့အခကျြတှအေမြားကွီးပါ။
ဒီလို ခွထေောကျကိုခြိတျထိုငျခွငျးအားဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ဘယျလိုအခကျြတှကေ မကောငျးဘူးလဲ၊ ဘာကွောငျ့မကောငျးရတာလဲဆိုတာကို အတူတူ လလေ့ာကွညျ့ကွပါဆို့။
(၁) အောကျဖျောပွပါပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျး ခွထေောကျကိုခြိတျထိုငျပွီး အလုပျလုပျမယျဆိုရငျတော့ အာရုံကွောတှကေို ပိတျဆို့ထားသလိုဖွဈစပွေီး အာရုံကွောအလုပျမလုပျတာတှေ၊ လဖွေတျခွငျးတှကေို အားပေးတာတှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒီလိုထိုငျနခွေငျးအားဖွငျ့ ခွထေောကျကို အလှယျတကူမရှနေို့ငျတာတှေ၊ ကွှကျသားထုံကငျြခွငျးတှေ စတာတှကေို ဖွဈစနေိုငျပွီး "Peroneal Nerve" လို့ချေါတဲ့ အာရုံကွောကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြားအရ ဒီလိုခွထေောကျကို ခြိတျထိုငျခွငျးဟာ (ယာယီ) သှေးပေါငျခြိနျကို သိသိသာသာ မွငျ့တကျစပေါတယျ။
(၃) ကိုယျဟနျအနအေထားမကောငျးမှုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြားအရ (၃)နာရီကွာ ခွထေောကျတှကေို ခြိတျထိုငျထားမယျဆိုရငျ ပခုံးတငျပါးဆုံးတှငျးနှဈဖကျကို တငျးတငျကကျြကပျြဖွဈပျေါစပွေီး ကြောရိုးကို လှဲမှားစှာဖွဈပျေါစတေဲ့အတှကျ ကိုယျဟနျအနအေထားဟာဆိုရငျ ကွှကျသှားတှငျးနာကငျြမှုကို တောငျ့တငျးမှုတှကေို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
(၄) အဆဈအမွဈမြား နာကငျြမှုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
ဒီလိုခွထေောကျတှကေို ခြိတျထားခွငျးဟာ ကိုယျဟနျအနအေထား မကောငျးစရေုံသာမက အဆဈအမွဈမြားကိုလညျး နာကငျြစနေိုငျပါတယျ။ လညျပငျး၊ တငျပါးဆုံ၊ နောကျကြော၊ ဒူးခေါငျးတှကေို နာကငျြစနေိုငျပါတယျ။
(၅) ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ ခွကေငျြးဝတျနာကငျြရောငျရမျးခွငျးကိုလညျး ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျမှာဆိုရငျ ခွထေောကျတှကေို လုံးဝ(လုံးဝ) ခြိတျမထိုငျသငျ့ပါဘူး။ ခွမေကျြစိတှရေောငျရမျးတာ၊ ခွထေောကျကွှကျတကျတာတှကေို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
သငျကိုယျတိုငျရော ခွထေောကျကိုခြိတျထိုငျတတျတဲ့သူတဈယောကျလား??? ခုဆိုရငျ ဒီလိုခွထေောကျခြိတျထိုငျခွငျးအားဖွငျ့ ဘယျလိုဆိုးကြိုးတှဖွေဈစတေယျဆိုတာကို သိရှိသှားပွီဆိုတော့ နောကျမြားမှာ သတိထားပွီး ဒီလိုခွထေောကျ ခြိတျမထိုငျဖွဈအောငျကွိုးစားမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ခြေထောက်ကို ချိတ်ထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ ဒီလို ခြေထောက်ကိုချိတ်ထိုင်တာက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ချက်ကိုတိုးပွားစေတယ်၊ စတိုင်ကျစေတယ်. . . ဆိုတာတွေ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင် မကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါ။
ဒီလို ခြေထောက်ကိုချိတ်ထိုင်ခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘယ်လိုအချက်တွေက မကောင်းဘူးလဲ၊ ဘာကြောင့်မကောင်းရတာလဲဆိုတာကို အတူတူ လေ့လာကြည့်ကြပါဆို့။
(၁) အောက်ဖော်ပြပါပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ခြေထောက်ကိုချိတ်ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အာရုံကြောတွေကို ပိတ်ဆို့ထားသလိုဖြစ်စေပြီး အာရုံကြောအလုပ်မလုပ်တာတွေ၊ လေဖြတ်ခြင်းတွေကို အားပေးတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုထိုင်နေခြင်းအားဖြင့် ခြေထောက်ကို အလွယ်တကူမရွှေ့နိုင်တာတွေ၊ ကြွက်သားထုံကျင်ခြင်းတွေ စတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး "Peroneal Nerve" လို့ခေါ်တဲ့ အာရုံကြောကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ဒီလိုခြေထောက်ကို ချိတ်ထိုင်ခြင်းဟာ (ယာယီ) သွေးပေါင်ချိန်ကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေပါတယ်။
(၃) ကိုယ်ဟန်အနေအထားမကောင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ (၃)နာရီကြာ ခြေထောက်တွေကို ချိတ်ထိုင်ထားမယ်ဆိုရင် ပခုံးတင်ပါးဆုံးတွင်းနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်ကျက်ကျပ်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကျောရိုးကို လွဲမှားစွာဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက် ကိုယ်ဟန်အနေအထားဟာဆိုရင် ကြွက်သွားတွင်းနာကျင်မှုကို တောင့်တင်းမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
(၄) အဆစ်အမြစ်များ နာကျင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုခြေထောက်တွေကို ချိတ်ထားခြင်းဟာ ကိုယ်ဟန်အနေအထား မကောင်းစေရုံသာမက အဆစ်အမြစ်များကိုလည်း နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်း၊ တင်ပါးဆုံ၊ နောက်ကျော၊ ဒူးခေါင်းတွေကို နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။
(၅) ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ခြေကျင်းဝတ်နာကျင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာဆိုရင် ခြေထောက်တွေကို လုံးဝ(လုံးဝ) ချိတ်မထိုင်သင့်ပါဘူး။ ခြေမျက်စိတွေရောင်ရမ်းတာ၊ ခြေထောက်ကြွက်တက်တာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ရော ခြေထောက်ကိုချိတ်ထိုင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လား??? ခုဆိုရင် ဒီလိုခြေထောက်ချိတ်ထိုင်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို သိရှိသွားပြီဆိုတော့ နောက်များမှာ သတိထားပြီး ဒီလိုခြေထောက် ချိတ်မထိုင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Read times Last modified on Monday, 22 February 2021 10:39